Mnangagwa frets over Mugabe links to new political party – The Citizen
Africa 8.3.2018 08:10 am
President Emmerson Mnangagwa has told Zanu PF youths that he is not happy with reports that his predecessor, Robert Mugabe, is linked to a new political outfit, National Patriotic Front (NPF).
Wednesday’s Zanu PF national youth assembly is the first since Mnangagwa took over from Mugabe, who resigned under pressure from the military.
On Wednesday, Mnangagwa implored Zanu PF youths to defend the party on social media.
“We, and the likes of (Zanu PF chairperson Oppah) Muchinguri-Kashiri, do not know how to do it. Go on to social media and tear our detractors apart,” he said as he commended party youths for launching social media campaign #EDHasMyVote.
Zanu-PF blames ‘illegal sanctions’ for all Zim’s problems, thanks Magashule and ANC for support	31.1.2019
Don’t go to Zim, Maimane, they won’t let you in – SA ambassador	31.1.2019
WATCH: 70-year-old takes third place in Miss Zanu-PF pageant	6.12.2018